Isayensi Yezwi Lidlula | Martech Zone
NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2015 NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2015 UJason McCoy
Lapho ubheka ukusebenza nge izwi phezu komculi ngomlayezo wakho wokubamba, ividiyo echazayo, ezentengiso noma yini edinga umxoxi onolwazi, kubalulekile ukukhetha umuntu onethalente elifanele lezidingo zakho ezithile. Izwi eliphakeme lingaphezu kokuthi nje umuntu okhuluma amagama athile, ngemuva kwakho konke, nawe ungakwenza lokho! Sebenzisa izwi elinolwazi nelinekhono phezu komculi kubalulekile ukuxhumana nomyalezo wakho ngendlela efanele.
Indlela engcono kakhulu, ngombono wami, ukuthola lelo lizwi eliphelele phezu komculi nge-Google endala enhle - noma iyiphi injini oyisebenzisayo! Ngabachwepheshe abaningi abanezitudiyo zabo, awukhawulelwe ekutholeni izwi phezu komculi endaweni yangakini, ngakho-ke ungasesha uze uthole lokho kuwulungela kahle umkhiqizo wakho. Lapho wenza leso sinqumo, izwi kuwebhusayithi yomculi linikezela ngemininingwane eminingi ukukusiza, kusuka kubufakazi kuya kumasampula omsebenzi wabo. Uma engenawo amasampula afana ncamashi nalokho okufunayo, ungesabi ukuxhumana futhi ucele isampula yangokwezifiso ukukunika umbono owengeziwe uma elungile. Iningi labaculi lizojabula ngisho nokuhlola ingxenye ethile yeskripthi sakho sangempela!
Njengoba isihloko salokhu okuthunyelwe sibonisile, kanye nokuthi kube nobuciko ku- izwi lochwepheshe liphelile, kukhona nesayensi kuyo, futhi lapho ingcweti yangempela ezokwenza khona ukuthi umbhalo wakho ukhanye.
I-Voice Over Cadence
Ukuthola i-cadence, ukuphakama nokuwa kwenkulumo okunesigqi, ngqo ngezwi ngaphezulu kuyinto enzima kakhulu ukufeza ukufundwa kombhalo, ngaphandle kwalapho umuntu ofundayo enguchwepheshe. Ngenkathi sonke sinesimo semvelo futhi sigeleza ngenkathi sikhuluma ngokuxoxisana, beka iskripthi phambi kwabantu abaningi futhi amagama aqiniswe futhi angaqinisekile.
Izwi eliphumelelayo ngaphezulu lidinga ukuzwakala ngokwemvelo ngasikhathi sinye ligcina ubude obudingekayo beskripthi. Ngenkathi abantu abaningi bengagijimisa iskripthi noma bavele amagama abo, izwi eliqeqeshiwe lomculi linolwazi namakhono adingekayo ukulinganisa isigqi senkulumo yabo ukuze silingane kahle esikhathini esinikeziwe.
Izwi Ngaphezulu Kwethoni
The ithoni yezwi okusetshenziswe kuzwi ngaphezulu kufanele kufane kahle nomkhiqizo, umkhiqizo nesikripthi, futhi okubaluleke kakhulu, ukufanisa ngendlela ezwakala ngokwemvelo. Noma kungathi sína futhi kuzolile ngomlayezo omisiwe esikhungweni sezokwelapha, ingxoxo nentombazane / umakhelwane kamakhelwane wevidiyo echaza ngebhizinisi, eqinile ne-punchy yokuthengisela abathengisi bezimoto, noma amanye amathoni amaningi ezwi, idinga ilawulwe kukho konke ukusebenza, okungelula ngaso sonke isikhathi.
Ithoni yezwi liyingxenye enkulu yokuveza ibhizinisi lakho nemikhiqizo noma izinsizakalo zakho kumakhasimende akho nakubathengi abangaba khona, ukuthole lokho kungalungile, futhi kungasho inhlekelele. Njengesibonelo, uma ukhiqiza umhlahlandlela wokuphumula futhi iphimbo lezwi lakho liyathengisa futhi liqinile, mhlawumbe ngeke uthole ibhizinisi eliphindayo!
Izwi Ngaphezulu Kwevolumu
Nakuba ivolumu kuyinto, yebo, engalungiswa ekwakhiweni kwangemuva kokukhiqiza, kuseyinto okufanele isondele kakhulu ekupheleleni ngesikhathi sokuqoshwa kwe-voice-over. Umthamo udinga ukukhala ngokwanele ukuthi wonke amagama ne-nuance athathwe yi-mic, kepha hhayi ngokuzwakalayo kangangokuba noma ngubani osebenza kwimikhiqizo eqediwe kushaywe imigqomo yakhe yezindlebe! Futhi kufanele ihambisane kuyo yonke indawo, ngenkathi izwakala kahle ngokwemvelo. Yize kungaba yisilingo kubantu abaningi ukusebenzisa ukukhuphuka kwevolumu ukugcizelela igama noma ibinzana, izwi elinethalente ngaphezulu kochwepheshe lizokwazi ukusebenzisa izici ezahlukahlukene zezwi labo, njenge-cadence noma ithoni, ukwenza into efanayo. Umkhiqizo ophelile ngeke uzwakale ungongoti kakhulu ngezingxenye 'ezimemezayo' lapha nalaphaya, ngemuva kwakho konke.
Izwi Ngokucaca / Ukuchazwa
Clarity kubalulekile kunoma yiluphi uhlobo lwephimbo, ngoba umlaleli udinga ukuqonda wonke amagama - ukube akuwona wonke amagama abalulekile ekudluliseni umyalezo, ngabe awekho kusikripthi. Umehluko phakathi kokuzwa inkulumo yokulingisa ngezwi nokwenza ngokomzimba kusobala ukuthi abalaleli abakwazi ukubona umlomo womlingisi wezwi unyakaza, okuyingxenye yendlela esiyiqonda ngayo inkulumo, ngakho-ke inqubo kufanele ibe ngeyasemoyeni ngokuphelele.
Ukuqondakala kalula ngenkathi uhlala ukhuluma ngokuqinisekile kuyikhono, futhi isayensi yezwi phezu kwabaculi inekhono kakhulu kuyo. Khuluma usheshe kakhulu futhi okunye ukucaca kulahlekile, kepha ukukhuluma ngokweqile nokukhuluma kwehliswa.
Njengoba ukwazi ukubona, izingxenye ezahlukahlukene zezwi ngaphezulu kwamasu zivamise ukugqagqana, futhi isayensi yokuzihlanganisa zonke ndawonye ekulandiseni okuzwakala ngobungcweti ingaba yinkohliso. Ithole kahle, noma kunjalo, namandla wezwi elingaphezulu azoba nomthelela omkhulu ekuthumeleni umlayezo wakho!
Tags: i-cadenceUkucacaisichazamazwiimikhiqizo ye-mccoyithoniizwi cadenceiphimbo elengeziweiphimbo elengeziweivolumu
Njengezwi eliphezu kwethalente, uJason McCoy uchitha isikhathi sakhe esiningi egumbini elincane eligwedlile ngemuva kwe-mic. Izwi lakhe lifakwe kumaphrojekthi kaDell, Walmart, Honda nezinye eziningi. Usebenza kakhulu ekuchazeni amavidiyo achazayo nawokumaketha ku-inthanethi. Lalela Amademo kaJason or funda ibhulogi yakhe imihlahlandlela nezinsizakusebenza ezihlokweni ezihlobene ne-voice over.
Sep 6, 2016 ku-10: 40 AM
Awu kuhle .. ngithole ulwazi olukhulu lapha mayelana nesayensi yezwi ngaphezulu .. Ngoba ngiyalithanda izwi labalingisi futhi ngiyabalandela kusukela ebuntwaneni bami .. Uthando lwami lokuqoqa ulwazi mayelana nephimbo ngaphezulu .. Ngifuna ube yizwi elidumile phezu komlingisi .. Siyabonga ngokwabelana ngalolu lwazi oluhle ..